४९ हजारमा २ टाँका,यो अस्पताल कि ‘डाँका’ ? सडक विस्तारले कसैलाई बेघर नबनाओस ! – Complete Nepali News Portal
ScotNepal April 3, 2018
४९ हजारमा २ टाँका,यो अस्पताल कि ‘डाँका’ ? सडक विस्तारले कसैलाई बेघर नबनाओस – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 205
ओठमा २ टाका र सामान्य उपचारको बिल ४९ हजार, टाका लगाउने कामलाई अप्रेशन रे। सोध्न गएपछि अलिकति घटाउने रे,मिडियामा जान्छु भनेपछि त “पैसाको के कुरा भो र यसो चिया खाउन” रे! शहरका केही अस्पतालमा दैनिक रुपमा मजाक चल्दैछ। कोहि छ हेर्ने?